အနာဂတ် Galaxy Smartphone တွေမှာ Notch ပါလာတော့မှာလား?
8 Nov 2018 . 11:20 AM
အခုချိန် Galaxy S8 ၊ S9 နဲ့ Note 8 ၊ Note9စမတ်ဖုန်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရင် တရိုတသေ ဖုန်းကိုင်ရမယ့်အနေထားရောက်နေပြီလို့ ပြောရတော့မှာပါ။ ဘာလို့လဲ? မနေ့တနေ့ကကျင်းပသွားတဲ့ Developer Conference မှာ Notch ပါဝင်လာမယ့် Infinity Display ၃ မျိုးတရားဝင်မိတ်ဆက်သွားတယ်၊ ဒီလိုသာဆိုရင် Samsung လည်း Apple လမ်းစဉ်လိုက်နေပြီလား?
ဟုတ်ပါတယ်၊ Marketing Director “Hassan Anjum” ကိုယ်တိုင် Conference ပွဲမှာ Infinity U ၊ Infinity V ၊ Infinity O ဆိုပြီး Notch Display ၃ မျိုးနဲ့ New Infinity ကိုပါမိတ်ဆက်ကြေညာသွားတယ်၊ Infinity U ကတော့ Essential Phone ရဲ့ Notch Design နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်။ V ဒီဇိုင်းက U နဲ့တူတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ အနားသတ် လုံးဝန်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့မြင်တွေ့ရမယ်။
Notch Display Concept Design
ပေါက်တဲ့နဖူး မထူးတော့ဘူးလို့ပြောရမလား Notch ပါတယ်ဆိုပေမယ့်လို့ Display ၃ မျိုးလုံး iPhone တွေလိုထူထူကြီးမဟုတ်ဘူး၊ Infinity O ရဲ့ Notch ပုံစံက စက်ဝိုင်းလေးလိုဖြစ်နေပေမယ့် Zenfone6လို Center မကျ၊ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမလား? လောလောဆယ်မှာတော့ Infinity O ဒီဇိုင်းကို သဘောမခွေ့ကျဘူးဖြစ်နေတယ်။
Small or Big? What does it really matter?
နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာနိုင်တာက New Infinity ဆိုတာပဲ၊ ဒီကောင်က လုံးဝ Notchless၊ ပြီးတော့ Edge-to-edge ပုံစံနဲ့ မြင်တွေ့ရနိုင်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် Samsung အနေနဲ့ စဉ်းစားရလာမှာက Slider Phone တွေလို Camera ၊ Sensor တွေတွန်းထုတ်သုံးရမှာလား? နောက်ပြီး ဘယ်အချိန်ကျမှ တကယ့် 100% Screen Ratio အပြည့်ကိုမြင်ရမှာလဲ? နောက် ၃ နှစ်နေမှလား?
When will it come? New Infinity!!
အခုလောလောဆယ်တော့ အတည်တကျ ပြောနိုင်တာမရှိသေးပေမယ့် Hassan Anjum က “Display Bezel တွေအရင်ထက် ပိုသေး၊ ပိုကျဉ်းလာမယ်၊ Infinity U ၊ V ၊ O တွေနဲ့ စမတ်ဖုန်း Display နည်းပညာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကန့်သတ်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီး” Notch ဒီဇိုင်းအသစ်တွေနဲ့ အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုတွေကို Samsung ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားပုံရပါတယ်။
အနာဂတျ Galaxy Smartphone တှမှော Notch ပါလာတော့မှာလား?
အခုခြိနျ Galaxy S8 ၊ S9 နဲ့ Note 8 ၊ Note9စမတျဖုနျးတှေ ပိုငျဆိုငျထားရငျ တရိုတသေ ဖုနျးကိုငျရမယျ့အနထေားရောကျနပွေီလို့ ပွောရတော့မှာပါ။ ဘာလို့လဲ? မနတေ့နကေ့ကငျြးပသှားတဲ့ Developer Conference မှာ Notch ပါဝငျလာမယျ့ Infinity Display ၃ မြိုးတရားဝငျမိတျဆကျသှားတယျ၊ ဒီလိုသာဆိုရငျ Samsung လညျး Apple လမျးစဉျလိုကျနပွေီလား?
ဟုတျပါတယျ၊ Marketing Director “Hassan Anjum” ကိုယျတိုငျ Conference ပှဲမှာ Infinity U ၊ Infinity V ၊ Infinity O ဆိုပွီး Notch Display ၃ မြိုးနဲ့ New Infinity ကိုပါမိတျဆကျကွညောသှားတယျ၊ Infinity U ကတော့ Essential Phone ရဲ့ Notch Design နဲ့ ခပျဆငျဆငျ။ V ဒီဇိုငျးက U နဲ့တူတယျဆိုပမေယျ့လို့ အနားသတျ လုံးဝနျးနတေဲ့ပုံစံနဲ့မွငျတှရေ့မယျ။
ပေါကျတဲ့နဖူး မထူးတော့ဘူးလို့ပွောရမလား Notch ပါတယျဆိုပမေယျ့လို့ Display ၃ မြိုးလုံး iPhone တှလေိုထူထူကွီးမဟုတျဘူး၊ Infinity O ရဲ့ Notch ပုံစံက စကျဝိုငျးလေးလိုဖွဈနပေမေယျ့ Zenfone6လို Center မကြ၊ ဟိုမရောကျဒီမရောကျ ပုံစံမြိုးဖွဈနမေလား? လောလောဆယျမှာတော့ Infinity O ဒီဇိုငျးကို သဘောမခှကေ့ဘြူးဖွဈနတေယျ။
Notch vs Original Display
နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ခကျြဖွဈလာနိုငျတာက New Infinity ဆိုတာပဲ၊ ဒီကောငျက လုံးဝ Notchless၊ ပွီးတော့ Edge-to-edge ပုံစံနဲ့ မွငျတှရေ့နိုငျတယျ။ ဒီလိုဖွဈလာမယျဆိုရငျ Samsung အနနေဲ့ စဉျးစားရလာမှာက Slider Phone တှလေို Camera ၊ Sensor တှတှေနျးထုတျသုံးရမှာလား? နောကျပွီး ဘယျအခြိနျကမြှ တကယျ့ 100% Screen Ratio အပွညျ့ကိုမွငျရမှာလဲ? နောကျ ၃ နှဈနမှေလား?
အခုလောလောဆယျတော့ အတညျတကြ ပွောနိုငျတာမရှိသေးပမေယျ့ Hassan Anjum က “Display Bezel တှအေရငျထကျ ပိုသေး၊ ပိုကဉျြးလာမယျ၊ Infinity U ၊ V ၊ O တှနေဲ့ စမတျဖုနျး Display နညျးပညာတှကေို ကြှနျတျောတို့ ကနျ့သတျလာနိုငျမယျဆိုပွီး” Notch ဒီဇိုငျးအသဈတှနေဲ့ အနာဂတျစိနျချေါမှုတှကေို Samsung ကြျောလှားနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျထားပုံရပါတယျ။